Shiinaha Sheet Muus dhalaalaya Sheega Suul Lugga iyo Warshadaha Qalabka Soosaarka iyo Warshad | Wode
Khariidadda Kabaha Suul Muus dhalaalaya ee kulul iyo Qalabka Ka-hortagga
Waxyaabaha: Fiber, Xabagta
Miisaanka: Marka loo eego tayada, dhumucda iyo cabirka
Midab: caddaan iyo jaalle
Xirxirida: duub ama xaashi
MOQ: 1000 go '
Isticmaalka: kabaha maqaarka, kabaha dalxiiska, kabaha soprt, kabaha haweenka
1.Production Line: Waxaan haynaa sideed xariiq oo aan soo saarno
2.Waxaan haysannaa badeecooyin iib ah oo aad u badan
Sida guddiga insole fiber, guddiga insole la eva, TPU sheet dhalaal kulul, ping pong sheet dhalaal kulul, warqad guddi insole, stripe insole guddiga, insole antistatic, guddiga shank, dhar nonwoven, qalabka insole, TPU filim dhalaal kulul.
Waxaa lagu buuxiyaa xaashi ama duub, badanaa 25 xaashi halkii buundo ama 50 mitir duubkiiba.Plastics waa la daabacan karaa haddii loo baahdo.
* Iyada oo guryaha of dabacsanaan, dusha siman, Iyada oo hawo wanaagsan ka dib markii wax soo saarka dhammeeyey. Adag adag iyo dabacsanaan dhexdhexaad ah.
* Nidaamka dhalaalida, heerkulka wuxuu u baahan yahay inuu gaaro heerka 120-160, waqtiga waa 12-20s,
* Ma u baahan tahay inaad hagaajiso heerkulka iyadoo loo eegayo dhumucda iyo kuleylka kuleylka.
* Uma baahnid inaad ku dhejisid xabag, qaab toos ah, isku xirnaan sare, ma sahlana inaad jabto.
* Ma sahlana in la qaabeeyo ka dib marka la dhalaaliyo, dib ayaa loo isticmaali karaa.
* Waxay ku habboon tahay ragga iyo haweenka 'kabaha milatariga, kabaha orodka, kabaha fuulista, kabaha golf, kabaha isboortiga iyo kabaha ganacsiga, kabaha badbaadada, iyo boorsooyinka & kiisaska, iwm
Q1: Ma waxaad tahay waxsoosaar ama shirkad ganacsi oo loogu talagalay guddiga sare, xaashida kiimikada, xaashida dhalaalka kulul?
A1: waxaan nahay shirkad gaar ah oo loo yaqaan 'insole board', xaashi kiimiko ah, xaashi kulul oo dhalaalaya in kabadan 15 sano, warshadeena waxay leeyihiin R&D noo gaar ah, sii wad kor u qaadida wax soo saarkeena
S2: Sideen ku heli karaa tijaabada?
J2: haddii aad u baahato shaybaar, waxaan u sameyn karnaa sida aad noo codsato. shaybaarku waa lacag la’aan, laakiin waa inaad bixisaa xamuulka xamuulka ee laguu soo celin karo ka dib markaad amarka bixiso.
Q3: Waa imisa xamuulka xamuulka ee shaybaarada?
A3: Xamuulka wuxuu kuxiranyahay wadarta culeyska iyo cabirka xirmooyinka iyo aagaaga.
Q4: Muddo intee le'eg ayaan filan karaa in tijaabada la iga qaado?
J4: Shaybaaradu waxay diyaar u yihiin inay umulaan 3 maalmood gudahood, shaybaarada waxaa lagu soo diri doonaa si dhakhso ah waxayna yimaadaan 3-10 maalmood.
Q5: Sidee loo dalbadaa adiga?
J5: Hal dariiqo ayaa ah inaad noo soo diri kartid faahfaahinta dalabkaaga iibsiga adoo ku soo diraya Email ama Fakis, ka dib waxaan kuu samayn karnaa qaansheegad proforma ah, ka dib waxaad naga bixinaysaa deebaajiga na, ka dib ayaan kuu diyaarinaynaa alaab. Hab kale ayaa ah inaad si toos ah uga dalban karto Alibaba, oo ku siin kara damaanad qaadkaaga caymiska, adiga, waa badbaado aad u badan, maaddaama ay jirto koox saddexaad oo Alibaba ah oo ku siinaysa dammaanaddaada si aad u hubiso inaad heli karto alaabada codsigaaga.
S6: Miyaan wakiil uga noqon karaa wax soo saarkaaga waddankayga? Haddii aan rabo inaan metelo alaabtaada, waa maxay shuruudahaagu?
J6: Waqtigaan la joogo, Wadan ka mid ah waxaan ku leenahay wakiil, haddii aad rabto wakiilkaaga dalkaaga, waxaad u baahan tahay inaad noo sheegto waddanka iyo magaalada aad tahay, iyo inta lacag ee la iibsaday hal sano gudahood, tan ayaa laga gorgortami doonaa ka dib markaad meel dhigto amarka koowaad nala.
Hore: dhar loogu talagalay xaashida xabagta kulul ee dhalaalka kulul
Xiga: ping pong xaashi kulul dhalaalay
1.5mm Suul Puff Counter dhalaal kulul
Qalab Fudud oo Fudud iyo Dib-u-celinta
Counter Iyo Suul Puff Samaynta Kabaha
Suunka Caan Bixin La'aanta Iyo Kaambarka
Dib-u-warshadaynta suulasha Puff Iyo Counter Back
Kabaha Lugaha Kabaha Iyo Laabashada Dhabarka
Kabaha Thermoplastic Suulka lugaha iyo Qalabka Ka-hortagga
Suulasha Puf Iyo Qalabka Tirinta
Suulasha lugaha Iyo Counter
Suulka Lugta Iyo Kaabis Waxyaabaha Kabaha Lagu Sameeyo
Suulasha lugaha Iyo Waxyaabaha Ka Tagan
Suulasha lugaha Iyo Qalabaynta Kaabashada
Suulka Puff Counter Stiffener
Velvet xaashida dhalada kulul ee dhalaalka kulul
ping pong xaashi kulul dhalaalay
dhar loogu talagalay xaashida xabagta kulul ee dhalaalka kulul
Xaashida xabagta TPU ee dhalaalka kulul
Guddiga Waraaqaha Waraaqaha leh Eva, Dhar aan Xakameyn oo leh Eva, Guddiga Insole oo leh Eva, Kabaha Xaashida Insole, Cirbadda Cirbadda Aan Dhicin, Maro Nonwoven Dahaarka leh Eva xumbo,